Ny lahatsoratr'i Jafar Sadhik momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jafar Sadhik
Mpivarotra dizitaly mazoto manana fahalalana tsara any an-tsaha toa ny fitaovana SaaS, CX, statistikan'ny churn, sns .. Teo aloha, niasa tamin'ny asa lehibe toa an'i SportsKeeda sy Neil Patel Digital India, ary miasa ao amin'ny SmartKarrot Inc. ary mpankafy lehibe ny sanganasan'i Agatha Christie.
Rindrambaiko ho toy ny serivisy ho an'ny serivisy (SaaS) ho an'ny taona 2020
Alarobia, Novambra 11, 2020 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Jafar Sadhik
Samy efa nandre momba ny Salesforce, Hubspot, na MailChimp isika rehetra. Nampiditra ny vanim-potoana nitomboan'ny fitomboan'ny SaaS izy ireo. Ny SaaS na Software-as-a-service, raha tsorina, dia rehefa mampiasa ny rindrambaiko amin'ny alàlan'ny famandrihana ny mpampiasa. Miaraka amin'ny tombony marobe toy ny fiarovana, ny toerana kely fitehirizana, ny manovaova, ny fahazoana miditra amin'ny hafa, ny maodely SaaS dia voaporofo fa mahavokatra tokoa amin'ny fivelaran'ny orinasa, manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny traikefan'ny mpanjifa. Ny fandaniana rindrambaiko dia hitombo amin'ny 10.5% amin'ny taona 2020, ny ankamaroany dia ho entin'ny SaaS.